नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान : कर्जा र निक्षेपको प्रक्षेपण अनिवार्य | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान : कर्जा र निक्षेपको प्रक्षेपण अनिवार्य
काठमाडौं । बैङ्क र वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको साउनभित्रमा कर्जा, निक्षेप सङ्कलनलगायतको विस्तृत वार्षिक योजना नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घको आयोजना तथा नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (सेजन)को संयोजकत्वमा बिहीवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले त्यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस)का आधारमा तयार गरिने वित्तीय विवरण र नियामक निकायका चुनौतीबारे जानकारी दिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा उनले भने, ‘वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्दा भविष्यमा अप्ठ्यारो नपरोेस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’
बैङ्कले आफूले दिने कर्जा र सङ्कलन गर्ने निक्षेपलगायत अनुमानित योजना सञ्चालक समितिबाट पारित गरी केन्द्रीय बैङ्कमा बुझाउन गभर्नर डा. नेपालले निर्देशन दिए । राष्ट्र बैङ्कले यसैलाई आधार बनाएर भोलि बैङ्कको सुपरिवेक्षण गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कर्जा माग्न ग्राहक धेरै आए, सबैलाई दिँदा बर्बाद भयो भनेर एकअर्कासँग लुछाचुँडी नहोस् भनेर यसो गरिएको हो,’ उनले भने । कर्जा प्रवाह र निक्षेप सङ्कलनको राम्रो योजना नहुँदा विगतमा रकम हुँदा लगानी नहुने र कर्जाको माग बढ्दा रकम नहुने समस्या देखिएको उनले बताए ।
योजना बनाएर काम गर्दा बैङ्कहरूलाई सहज हुने भएकाले केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरेको बताउँदै गभर्नर डा. नेपालले भने, ‘वित्तीय स्थायित्वलाई कायम गर्न र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन यसले सहयोग गर्ने अपेक्षा छ ।’
नयाँ मौद्रिक नीतिको व्यवस्था अनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात घट्दा ६६ अर्ब रुपैयाँ बजारमा गएकाले अब ब्याजदर घट्नुपर्ने उनको तर्क थियो । ३ हप्तामा मात्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ९३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ प्रशोचन गरेकाले अहिले बजारमा लगानीयोग्य रकम सहजै उपलब्ध हुने अवस्था भएको उनले बताए । यस्तो सहजता हुँदा आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन कुन क्षेत्रमा कसरी दीर्घकालीन लगानी गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्न बैङ्कहरूलाई सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
अहिले केही बैङ्कले कर्जा लगानीमा ब्याजदर घटाउन शुरूसमेत गरिसकेकाले उद्यमी व्यवसायीले कम ब्याजमा कर्जा लिन पाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
लगानीयोग्य पूँजी पर्याप्त भएको बेलामा व्यवसायीले कर्जा लिनुपर्ने र यस्तो बेला बैङ्कले ब्याजदर कम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले राष्ट्र बैङ्कले कुनकुन व्यवसायमा लगानी गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको जानकारी पनि दिए । ‘केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशन पालना गर्न आह्वान गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्र बैङ्क कठोर भएर पुलिसले जस्तो व्यवहार गर्न नपरोस् ।’
बजारमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रहेकाले सरकारले लक्षित गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पूरा हुने गभर्नर डा. नेपालले ठोकुवा गरे । करीब १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सहायता पु¥याएको कृषिक्षेत्रमा धेरै वर्षपछि करीब ९० प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ भएकाले कृषि उत्पादन बढ्ने र यसले सहायता गर्ने उनको भनाइ थियो ।